Isku-Jinsinimada Mala Doortaa Mise Waa Dareen Dabiiciya? – Kaasho Maanka
Isku-jinsinimada: Dadka jinsiga lamidka ah dareen rabitaan xiriir u qaba.
Labo-dareeneed: Dadka labada jinsiba dareen rabitaan u qaba.
Haddaad xuquuqdaada iyo ahaanshahaaga u doodi waydid waxaa dhacda in dad kale booskaas buuxiyaan oo sharraxaad khaldan ka bixiyaan waxaad tahay, iyagoo dantooda u adeegsanaya, waana mushkiladda heysata bulshada LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender). Maxaa yeelay, maqnaanshaheenna natiijadeeda waxay noqotay faham-darradii oo korortay. Faham darrada laga dhaadhiciyay bulshadeenna waxaa ka mid ah fikradda leh inuu qofka doorto ama isku beeri-karo dareenka isku-jinsinimada ah sida ay dadka qaar amiinsanyihiin oo sidaaas awgeedna isku-jinsinimadu tahay hab-nolaleed doorasho ka dhashay. Su’aalaha isweydiinta mudanse waxaa waaye:- marka hore doorashadaa sideebay u dhacdaa iyo maxaa caddeyn u ah aragtidaas?
Doorashada ay dadkaan aaminsan yihiin waxay u kala baxaysaa laba qeyb; doorasho hore iyo doorasho dambe. Sida hab-fikirkan doorashada ah arrintan uu u dhigayo. Doorashada hore waa marka ubadka yar oo weli qaan gaarin dalbanayo inuu ku daydo “dhaqamada” bulshada LGBT-ga ama qof qaangaaray oo tijaabo kadib doortay dareenkan ayagoo markaas dareenkooda caadiga ah u beddelay mid isku-jinsi ah. Doorashada dambana waa marka shakhsigu doorto inuu raadsado dabiib baddaalaad ku keena dareenkiisa (Conversion therapy) si uu isaga daweeyo dareenka isku-jinsinimada ah. Si kooban;─ fikirkaan wuxuu leeyahay ‘qofka isaga ayaa doortay inuu dareenkaan la noolaado isaga ayaana dooran kara inuu iska suuliyo!’
Boodhad u ololaynaysa bedelista dareenka isku-jinsinimada | Exodus
Haddaba, hadday isku-jinsinimadu tahay doorasho, waa inuu jiraa hab ama qaabfudud oo dareenkaas lagu tiri karo balse si saas ka duwan ayay xaqiiqada arriintaan caddeyneysaa. Tusaalo-ahaan, waxaan isticmaali karnaa kiiska ururka “Exodus International” iyo isku daygoodii fashilmay. Laga soo bilaabo 1976 ilaa 2013 ururkaan wuxuu awoodda saaray inuu baddalo dareenka dadka LGBT-ga ee rumeysnaa diinta masiixiga. Waxay adeegsadeen qaab kasta oo ubaabi’in karaan dareenka iskujinsiga ah, sida;- in si cilmi nafsi ah loo daweeyo, qofka isaga oo loo ceebeynayo dhaqankiisa ama carada eebihiisa oo lagu baraarujinayo, in la koronteeyo qofka si uu u xasuusto xanuun marwalbuu ukacsado qof la jinsi ah iyo inkaloo badan. Inkastoo ay sameeyeen isku dayo badan ugu dambeyn, 2013, waxay qirteen in ay dabiibi waayeen dareenkan. 99.9% dadkii ay 37sannadood ka dabiibayeen dareenka isku-jinsiga wax isbaddal ah kuma imaanin dareenkooda bal ayba daaweynta noocaan ah ka qaadeen xanuunada maskaxda. Sannadkii horana waxaa kasoo horjeestay daaweynta ceynkan ah oo cambaareeyay ururka dhakhaatiirta dhimirka ee caalamiga ah kuwaas oona caddeeyay in isku dayga daweyntan dareenkaan aysan waxtar lahayn isla jeerkaana ka dhasho dhaawacyada maskaxda ah ayna tahay waxa ugu horreeya ee sababa isdilka bulshada LGBT-ga.
Geri | Andreas Dress
Marka intaa laga yimaado arrin kale oo khilafasan hab-fikirka dhahaya waa doorasho, waa inuu sayniskii dabeecadda isku-jinsiga ka helay in kabadan 450 nooc oo xayawaan ah oo ay ka mid yihiin geriga, xuurka madow (black swan) iyo idaha. Cilmi baarista geriga waxay caddeysay in dhammaan falalka galmeed uu xayawaankan sameeyo badankooda yihiin kuwa isku-jinsiyeed. Labada lab ee geriga waxay xiriirkooda ka billaabataa qaab dagaal qaffiifsan iyagoo qoor-ahaan dagaaltama si’ay ukacsadaan, mid ayaa qoorta utaago si toosan markaas ayuu kan kale ka fa’iideystaa oo dul fuulaa. Sidoo kale, xuurka madow oo afar meelood hal meel labkiisa lagu arkay dabeecad ah inay ukumaha ka xadaan buulasha kale si’ay nidaam isku-jinsi ah ilmaha isula koriyaan haddiba ay helin dhedig u ukuma dhasha. Sidoo kale waxaa lagu qiyaasay 8% idaha labka ah inay doorbidaan ido kale oo lab ah xitaa marka labka la ag-geeyo ido dheddig ah oo bacrinsan. Xaqiiqadu markay sidaa tahay, su’aasha waxay noqonaysaa xayawaan aan lahayn waxgarasho ma awoodaa inuu doorto dareen mise waxaa dhaqammadaan ka dambeysa sabab dabiici ah?
Aragtida saxsan iyo midda been abuurka ah waxaa kala saari kara sida ay xaqiiqada u waafaqsan yihiin oo isku meel ma wada gali karaan andacoodka ah in isku-jinsinimadu tahay doorasho ula kac ah iyo inay tahay xaqiiqada sheegaysa in dareenkaan xittaa xayawaanka oo si dabiici ah nolosha ula fal galo leeyihiin. Waayo? doorasho micnaheedu waa ficil ka dhashay ujeedo ama fikir hore waana awood aqooneed, xayawaankuna badankood malahan awooddaas qaasataan kuwa aan tusaaleynay sidaas darteed waa inaan raadinno sharraxaad kale oo aan ka hor imaaneynin xaqiiqada iyo cilmiga.
Qodobka cilmi nafsigu isku raacsanyahay: Dareenka galmada iyo ka jaceylkuba malaha doorasho!
Markaan eegno sharraxaadda cilmi nafsiga ah ee la isku raacsan yahay, qodobka koobaad waxaa waaye in dareenka galmada iyo jeceylka aheyn shay doorasha leh weliba inay jirto sabab ama sababo dabiici ah oo keeno dareen-duwanaashada, in kastoo saynisyahannada ku kala aragti duwan yihiin habka uu falkaan ku askumo. Mid waa aragti hidde-sideed oo muujineysa in sababta tahay raad yeelka hidde sidayaasha─kuwa aragtidan qabo waxay daliishadaan cilmi baarisyo ay ka mid tahay cilmi baaristii ugu dambaysay ee la daabbacay Agoosto, 2019, gunaanadkeeeduna ahaa in hidde sidayaashu ka qaybqaataan sameynta isku-jinsinimada.
Aragti kale waa tan leh sababo kale oo baayooloji ah ayaa horseedo qaasatan isku-jinsinimada raga iyaguna waxay heystaan daliilo gooni ah. Tussale ahaan, mar kaste ay hooyadu dhasho wiil waxaa sii kordhayo jaaniska in wiilka dhalashada dambe noqdo isku-jinsi waxaana yeelay jir-difaaca hooyada ayaa kaca weerarna ku qaada borotiinka nimeed ee ubadka dhalandoona taasine waxay raad ku reebtaa dareenkiisa jinsiga.
Aragti saddexaad waxay leedahay in tababarka iyo bii’ada ilmaha ayaa asal uu ah isku-jinsinimada balse aragtidaan dambe weli caddeyn saynis ah ma kulansan, sidaa darteedne saynisyahannada way diideen sababtaan dambe. Labada aragti ee tartamaya kan hidde-sideedka iyo kan baayoolijiga ah midne kaligiisa uma sharaxi-karo si dhameystiran waxa qofka ka dhiga isku-jinsi sidaa awgeed aragtida sayniseed ee maanta waa mid aan qabin in hal sabab oo keliya ay jirto. Waayo? waxaa la fahamsanyahay inay jirto sababo kala madax-bannaan oo dareen-duwanaansho abuura sidoo kale waxaa saynisyahannadu aqoonsadeen in dareennadu ballaaranyihiin oo keliyana ay ku koobneyn isku-jinsinimada.
Dareemaha xiriirka ee aadanaha waa kuwa ballaaran oo hadda dhow barashadooda iyo kala saarkoodu billowday halkii markii hore la isku dhex qasi jiray dareemo qaab ahaan iyo dhaqan ahaanba kala duwan. Sida la og-yahay waxaa jiro dad (iyo xayawaan) labo-dareeneed ah oo labada jinsi rabitaan xiriireed uqabo. Si taa ka duwan, waxaa kale ee jiro kuwa kacsi-la’aan ah lakiin weli dareemo dareenka jaceylka oo keliya oo doonayana xiriir aan laheyn galmo, intaa waxaa dheer kuwa dareen jeceel oo dhan dareemin iyago xiiso uqabo galmo raaxeynta keliya. Welibane intaasi kuma eka duwanaanshaha oo qaar ka mid ah dadka una badan haweenka dareenkooda maaha joogto balse waa isbedelaa oo marxalado kala duwan maraa. Intaas oo ay jirto mid kaste wuxu u baahan yahay baaritaanno iyo dabagal gooni ah mana suurtagaleyso in hal sabab iyo sharraxaad qura loo helo sida, aragtida aaminsan in gebi ahaan dareenkaan yahay mid doorasho, jiho ama dareenka galmada iyo isir galmeedkuba way ka mug weyn yihiin wax loo sababayn karo hal arrin oo la caddeyn Karin, isla jeerkaasna caadifo iyo dhaqan dhowr darteedna loo dhahay. Waxaana halkaa ku cad farqiqa weyn ee uu dhexeeyo sharraxaadda fudud (waa doorasho) iyo xaqiiqada (seyniska).
W/Q: Saabir Yare 21st October 2019